Casharkaan oo cinwaan looga dhigay agabyada xafiiska Jarmalka, halkaas oo aan ku baari doonno qalabka xafiisyada Jarmalka, waxaan ku bari doonnaa qalabka iyo qalabka guryaha ee ugu isticmaalka badan Jarmalka. Mawduucani wuxuu ku saleysan yahay xafididda waana ku filan tahay in marka hore la barto ereyada inta badan la isticmaalo.
Alaabada Jarmalka In kasta oo ay u muuqato inay inta badan khusayso ganacsiga Jarmalka, waa arrin aad u muhiim ah maaddaama ay jiraan qalab iyo agab aan u adeegsanno qaybo badan oo nolosheena ka baxsan goobta shaqada. Inta aan casharkeena dhigeyno, waxaan ku siineynaa liiska qalabka lagu isticmaalo xafiiska, liiska waxyaabaha loo isticmaalay xafiiska iyo liiska alaabta xafiisyada ee miisaska kala duwan.
Isku day inaad ku xafiddid eray kasta oo ku jira jadwalka la socda qodobadooda iyo macnahooda wadaagga ah. Hubso inaad ku isticmaasho ereyada cusub ee la bartay jumladaha intaad ku guda jirto tababarka xafidista ereyga. Sidaas ayaad xafladaha xafladaha uga dhigi doontaa mid fudud oo lagu xasuusto.
Qalabka Xafiiska Jarmal u dhigma
computer → kombiyuutarka
bandhigay → der Bildschirm
Afhayeenka → der Lautsprecher
phone → das Telefoon
Mashiinka koobiyeynta → koobiyeeyaha
Mashiinka fakiska → das Faxgerät
Daabace → der Drucker
Kaydadka → dhinto Patrone
Mashruuc → der Projector
Xisaabiyaha → der Taschenrechner
Qalabka Jarmalka ee Jarmalka Sawir
Saaxiibbada qaaliga ah, aan u sharaxno qalabka xafiiska Jarmalka ugu isticmaalka badan leh sawirro.
Waxyaabaha Lagu Isticmaalay Xafiiska Jarmalka
Hadda aan u aragno walxaha Jarmalka ee loo isticmaalo xafiiska miis ahaan.
Waxyaabaha Lagu Adeegsado Xafiiska Jarmal u dhigma
tirtire → der Radiergummi
Maqas → dhinto schere
Fiiqan → der Anspitzer
Waraaq yar → dhinto Büroklammer
Suufka qorista → der Schreibblock
Xukunka → das Lineal
Baqshad → der Briefumschlag
Shaabad → dhinto Briefmarke
Xabagta → der Kleber
Qalinkii → der Kugelschreiber
Qalinkii → der Füllfederhalter
qalinka → derbi jiifka
Calaamadeeye → der Fluoreszierender Stift
Qalin → der Bleistift
Xusuusin xannibaadda → der Block
buugga → das Notizheft
Fayl → dhinto Mappe
Bogagga → dhiman Dias
Astaamaha → dhinto Hefter
Dhajiye → dhinto Heftzwecke
calendar → der Kalender
Hoos waxaa ku qoran luuqadaha Jarmalka iyo Turkiga ee qalabka xafiisyada ee inta badan la isticmaalo.
Alaabada Jarmalka Jarmal u dhigma
Dambiisha wasakhda → der Papierkorb
calanka → dhinto Calanka
Siraaj → dhiman Lampe